Blog – Page3– T-WORK SYSTEM
Hosting ၁ ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါမယ်နော်T-WORK SYSTEM မှာ Hosting ကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ✔လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Single Page ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ✔လောလောဆယ် Development ပိုင်း မလုပ်ဖြစ်သေးရင်တောင်မှ Single Page လေး ရရှိထားတော့ လုပ်ငန်းအတွက် Website လေး start…
Business အတွက် Websiteရှိနေပြီလား ???ဥပမာ 》》 https://www.example.comလူအများစုဟာ Internet ကိုFacebook တခုတည်းကိုသာမဟုတ်တော့ပဲ ပိုမိုရင်းနှီးစွာ အသုံးပြုလာကြပါပြီ။Internetကိုအသုံးပြုပြီး onlineပေါ်ကနေ ဈေးကွက်အပြိုင်ရှာဖွေနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ Facebook Business Page ရဲ့ Profile ထဲကWebsite Address ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကွက်လပ်ဖြစ်နေလို့မရတော့ပါဘူး။Email AddressနေရာမှာGmail အစား ကိုယ်ပိုင်…
Domain နဲ့ Hosting များကို Visa Master Card မလိုပဲ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သည့် Website တစ်ခုရှာဖွေနေပါသလား?
ဘေဘီ့ကို မေးလိုက်ပါ Facebook Page ပဲ သုံးနေတော့မှာလားလို့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Website သုံး ကြည့်မလားလို့ ☺️
ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် လူတွေက များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးအကြောင်း ကိုယ့်Product တွေအကြောင်းကို Facebook Page ထောင်ပြီး ကြော်ငြာလာကြပါတယ် ။ Facebook Page က ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပြီး ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတာမို့ လူတွေက Website ထက် Facebook Page ကိုပိုပြီး…
ပစ္စည်းအသစ်ထွက်ရှိလာတိုင်း ဈေးနှုန်းတွေအသစ်ပြောင်းလဲတိုင်း Catalog စာအုပ်ကြီးတွေ 📘📘ထပ်ထုတ်နေဦးမှာလား ❓❓
Catalog Book 📘 ရှိလားတဲ့ မရှိဘူးတဲ့ 🚫 Product Catalog Book တွေသုံးပါလားတဲ့ ဆက်မမေးရဲတော့ဘူး ကြောက်လာပြီ😩T-WORK ရဲ့ Catalog App 📲 ပဲ သုံးမှာ 🤗ထပ်မမေးနဲ့တော့တဲ့😡 အခုလို IT ခေတ်ကြီးမှာ စာအုပ်တွေထက် ဖုန်းတွေက အသုံးများလာပီနော်…
✉️mail ပို့ရင် အများအားဖြင့် @gmail.com နဲ့ ပို့လေ့ရှိကြတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ @companyname.com နဲ့ ရောက်လာတာ တွေ့ကြဖူးမှာပေါ့။အဲ့ဒါကို 📧 Email or Webmail လို့ခေါ်ပါတယ်။ Email က အောက်ပါအချက်အလက်လေးတွေကြောင့် အခုဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီနော် 🖌…
ခုလို IT ခေတ်ကြီးထဲမှာ ရိုးရိုးMarketing တွေပဲ သုံးနေကြဦးမှာလား?? 🤔🤔
ခုခေတ်မှာဆိုရင် လူတွေက Facebook လိုမျိုး Social Media တွေမှာ ရှိနေကြတဲ့အချိန်ကများတဲ့အတွက် Facebook မှာ Marketing လုပ်တာက လုပ်ငန်းကို ပိုမိုတွင်ကျယ်စေမှာပါ 📈📈 ကဲ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ T-WORK SYSTEM ကနေ ထူးခြားဆန်းသစ်လှတဲ့ Digital Marketing နည်းလမ်းတွေနဲ့…
How to buy Domain and Hosting from T-WORK SYSTEM Website?
Domain နဲ့ Hosting များကို Visa Master Card မလိုပဲ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သည့် Website တစ်ခုရှာဖွေနေပါသလား။Hosting နှင့် Domain Name လိုအပ်နေသူများအတွက် T-WORK SYSTEM Website တွင် Domain နှင့်Hosting ဝယ်ယူပုံအဆင့်ဆင့် ကို 4.24…
ကဲ အဲ့လိုထပ်ထုတ်စရာမလိုဘဲ Catalog ထဲက Data တွေ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အမြဲပြင်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Mobile Catalog App လေး သုံးကြရအောင်။။ 📲📲 Mobile Catalog Application ??🤔Catalog Application ဆိုတာ တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ Calatog စာအုပ်ကြီးတွေကို ကိုယ်နဲ့တပါတည်း သယ်ယူသွားလို့ရအောင် ဖုန်းထဲကို…